Washington: Maraykanka oo China ku eedeeyey daandaansi militari – VIDEO - iftineducation.com
Washington: Maraykanka oo China ku eedeeyey daandaansi militari – VIDEO
aadan21 / May 19, 2016
iftineducation.com – Diyaaradaha dagaalka ee China ayaa la sheegay inay khal khal geliyeen diyaaraad wax basaasta oo uu Maraykanka leeyahay oo dul mareysay bada la isku heysto ee koonfurta China.
Warbixinta kasoo baxday Arbacadii shalay Wasaarada Gaashaandhiga Maraykanka ee Pentagon ayaa lagu sheegay in diyaarada ay leeyihiin militariga Maraykanka ay mareysay hawada caalamiga ah, xiligaasi oo ay labo diyaaradood oo nooca dagaalka ah ee China leedahay ay daan daansadeen ama u hanjabeen.
Arrintan ayuu Maraykanka ku tilmaamay mid khatar keeni karta, balse China ayaa ku eedaysay Maraykanka inuu yahay kan daan daansiga u yimid badooda.
In muddo ah ayey xiisad kasoo taagneyd badda loo yaqaan Koonfurta China oo jasiiradaha ku yaal ay isku heystaan dhowr wadan oo deris la ah China ee ah xulafada Maraykanka, balse dowlada China ayaa sheegata dhamaan badaasi iyo jasiiradaha ku yaal ayaa dhawaan bilowday inay badaasi ka dhex sameysato Jasiirado yar yar oo ay ku yaalaan saldhigyo militari.
Murranka biyaha badda koonfurta China ayaa sidoo kale la sheegaa inay la xariirto macdanta iyo khayraadka halkaasi ku jira, isla markaana badaasi ayaa muhiim u ah isu socodka maraakiibta caalamka isaga kala gooshta.
Awooda militari ee China oo kusii fideysa badaasi ayuu Maraykanka ka cabsi qabaa maadaama Maraykanka ay badaha qaarada Aasiya ka joogaan Maraakiib badan oo dagaal, isla markaana saldhiyo ku leeyahay wadamada xulafada la ah ee uu loolanka kala dhaxeeyo China.
China ayaa dhankeeda ku eedaysay in Maraykanka inuu hub badan kusoo daabulayo qaarada Aasiya si markaasi uu u caburiyo dalalka soo koraya oo ay China hormuudka u tahay.
Militariga Somaliya oo sheegay in 14 Shabaab ah lagu dilay hawlgalada Gobolka Shabellaha Hoose (SAWIRRO)..
Aspirin-ka oo wax ka taraya shalalka